विदेशमा बसेर पुस्तक लेख्ने? :: महेन्द्र पौडेल :: Setopati
विदेशमा बसेर पुस्तक लेख्ने?
प्रत्येक सेकेण्ड मिनेट र घण्टालाई युरोमा रूपान्तरण गरेर युरोपमा बस्नेहरुले घण्टौं काममा जोतिन्छन् र पैसा अर्थात युरो कमाउँछन्।
घण्टाका आधारमा दैनिक, साप्ताहिक र मासिकरुपमा ज्याला दिने चलन छ युरोपमा। अति व्यस्त र अति छिटो दौडिरहेका यी ऐतिहासिक, मनमोहक शहरहरु मध्ये फ्रान्सको पेरिसमा बसेर अरुहरुले कामको खेती गरिरहँदा ददी सापकोटाले काम र अक्षर दुवैको खेती गर्दछन्।
डेढ दशकदेखि पत्रकारिता क्षेत्रमा लेख्दै आएका सापकोटा केहीवर्षदेखि नेपालबाट फ्रान्सलाई कर्मथलो बनाए। फ्रान्सबाट ब्लग चलाएर नेपाली समाजको विकृति र विसंगतिको खेदो खनेका सापकोटा त्यतिबेला चर्चामा रहे जतिबेला फ्रान्सस्थित नेपाली दूतावासभित्रका तत्कालिन राजदूत कृष्णमोहन श्रेष्ठकापालामा भएहुने गरेको भ्रष्टाचारलाई सार्वजनिक गरेपछि अख्तियारसमेतले चाँसो राखेर छानविन थालेबाट उनको चर्चा चुलिएको हो।
नेपाली झ्याउरे टाइपको टिपिकल लेख्ने सापकोटा निडर र निष्पक्ष लेखक तथा पत्रकारका रूपमा युरोपमा चिनिए पनि नेपालमा भने उनको चिनारी विस्तारै छायाँमा पर्दै गएको बेलामा उनको अर्को किताब बजारमा आउँदै गरेको छ ‘वाइल्ड लाइफ।’
स्तनधारी जीवजन्तुका बारेमा सोधखोज अध्ययन अनुसन्धान गर्दै सापकोटाले पशुपन्छीको जीवनीका विषयमा किताब तयार पारेका हुन। सो कितावलाई फाइन प्रिन्टले बजारमा ल्याउन लागेको हो।
‘वाइल्ड लाइफ’ नाम दिइएको यस किताबभित्र जीवनजन्तुका विषयमा चाखलाग्दो तरिकाले बर्णन गरिएको छ। जीवजन्तुले कसरी बलत्कार गर्दछन् साथै उनीहरु समलिंगी हुन्छन् कि हुन्नन् भन्ने कुराहरु यसमा समेटिएको छ।
लगभग तीन सय पृष्ठको यस पुस्तकभित्र बलत्कार रोक्नुमा जीवजन्तुहरुले कस्ता उपायहरु अपनाउने गर्छन्। बलत्कार भएपछि कारबाही हुन्छ कि हुन्न? साथै उनीहरुले कुन तरिकाले भूकम्प आउन लागेको पत्ता लगाउँछन्? चराहरु विमानमा ठोकिएको हो कि विमान चरामा ठोकिएको भन्नेकुराहरु यसमा छन्।
यसअघि सापकोटाका सन् २००४ मा पहिलो "पंक्षीजगत" नामक चरासम्बन्धी पुस्तक प्रकाशित भएको थियो। वर्ड एजुकेसन सोसाइटीले चरासम्बन्धी निकालेको सो पुस्तकमा चराको बनोट, आकृति र चरा हेर्न जाँदा ध्यान दिने कुराहरु समेटिएका थिए। सो कितावमा हिमाल पहाड र तराईमा पाइने चराहरुको विस्तृत वर्णन गरिएको छ। करिब दुइसय असी पृष्ठको सो पुस्तक लाई चरासम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गर्नेहरुका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको लाइव्रेरीमा समेत राखिएको छ।
लेख्न अति मनपराउने सापकोटाका यो पाँचौं कृति हो। यसअघि उनका चार किताब प्रकासित छन् त्यसमध्ये दुइ पुस्तकले युरोपभरी चर्चा बटुलेको हो। "दुःखेको युरोप" उनको तेश्रो कृति थियो। उनले २०७२ सालमा लेखेको यस कितावलाई हिमाललयले प्रकासनमा ल्याएको थियो। युरोपमा नेपालीहरु कसरी आए? कुन बाटोबाट आए? कति दुःख पाए? यी यावत पीडाहरु समेटेर उनले पुस्तक तयार पारेका हुन्। एउटा पुस्तक लेख्न यिनले आधादशक समय गुजारेका छन्। वल्लो छेऊ र पल्लो छेउ चहारेका छन्। रेल, बस र प्लेनको यात्रामा दौडेका छन् केवल अक्षरका लागि। अरुहरुका पीडा र व्यथालाई कितावमा समेट्न उनको मेहनत लगाव र प्रेम समाज र देशको लागि उच्च छ।
त्यसैगरी जगदम्बा प्रकाशनले सन् २०११ मा प्रकासित गरेको "त्यो नेपाल" पुस्तक विशेषगरी विदेशीहरुले औधि मनपराएका किताब हो। उनले पाँचवर्ष लगाएर लेखेका यस किताबमा २९ जना फ्रान्सेलीहरुको अनुभव समेटेका छन् जसले नेपाललाई कर्मथलो बनाएर जीवन गुजारे। बिदेशमा बसेर किताब लेख्नु एकदम गारो कुरा हो। युरैयुरौले पुरिएको युरोप हो मान्छेहरु हिडेँको पनि युरोमा गणना गर्दछन्। शरीरको पानी र मुत्रथैली फाल्दासमेत पैसा लाग्ने ठाउँमा ददी सापकोटाले कसरी पाँचपाँच किताव लेखे आश्चर्यको विषय भएको छ। उनमा रहेको त्यो मेहनत, जाँगर र रहरको कुरै नगरौं। मान्छेको विषयमा त ठिकै थियो तर चराहरुका विषयमा लेख्नु भनेको गाह्रो कुरा हो। चराहरु आफैंमा स्वच्छन्द हुन्छन्। उनीहरु उडेको हिडेँको बोलेका कुरालाई अध्ययन गरेर लेख्नु झनै गारो कुरा हो त्यो पनि बिदेशमा।
देशमा खासगरी मोफसलमा बसेर लेख्नेहरुको पीडा नदेखेको होइन। उनीहरुको चर्चा कमै हुन्छ। काठमाडौ बाहिरबाट प्रकासित भएका किताबहरुको विमोचनले मुलधारका पत्रपत्रिकामा त्यति स्थान पाएको देखिँदैंन लेखकहरुको त कुरै नगरौं। यस्तो बेलामा झनै बिदेशमा बसेर किताब प्रकासित गर्नेहरुको चर्चा हुनु झनै परको कुरा हो। तर उनका अहिलेसम्मका सबैकृतिहरु मानवजातीका लागि उपयोगी छन्।
प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत २५, २०७५, ०३:३७:००